I-OnePlus 7 Pro: uyilo lwayo luqinisekisiwe kwipowusta yentengiso | I-Androidsis
Lo mfanekiso wentengiso uqinisekisa uyilo lwe-OnePlus 7 Pro
Kuncinci okusele kwenkqubo ye- intetho esemthethweni ye-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro, Isizukulwana esitsha sababulali abaphambili abavela kwinkampani yaseTshayina. Sele siyazi ezinye iinkcukacha zescreen sedivayisi Kwaye ngoku sinokuqinisekisa uyilo oluya kuba nemodeli enevithamini yesizukulwana esitsha se-OnePlus.
Kwaye yile, kwiphephandaba iNew York Times ifoto ivele imema intetho apho sinokubona ukuba uyilo lwe-OnePlus 7 Pro luya kuba njani, luqinisekisa ukumiswa kwekhamera kathathu kunye nenkqubo ye-pop-up eya kuthintela ukudibanisa ikhamera kwiscreen okanye usebenzisa inotshi.
Iqinisekisiwe: oku kuyakuba kuyilo lwe-OnePlus 7 Pro ngasemva
Njengoko ubona kumfanekiso ophethe le migca, ungabona ngokucacileyo okucacileyo ukuba ukumiswa kwekhamera kathathu ye-OnePlus 7 Pro kuya kuba njani, ukongeza ekuboneni ikhamera yesine efihliweyo eya kuthi isebenzise inkqubo erhoxiswayo ukuvela xa ufuna ukuthatha iifoto njenge-selfie. Kwelinye icala, siyabona ukuba akukho slot ye-3.5 mm, ke ngekhe sikwazi ukudibanisa ii-headphone ezinentambo.
Ngokumalunga neempawu zobuchwephesha ze-OnePlus 7 Pro, nangona okwangoku singenakuqinisekisa nayiphi na idatha, kuyacaca ukuba iya kuba yiflegi kunye nesona sixhobo sibalaseleyo kwintengiso. Ngale ndlela, esi sigxina siya kuba neprosesa Qualcomm Snapdragon 855 kunye ne-6 okanye ye-8 GB ye-RAM, ukongeza kulungelelwaniso olwahlukeneyo lokugcina olunokuvela kwi-64 ukuya kwi-512 GB yememori yangaphakathi.
Elinye lawona macandelo anomdla kwesi sigxina siza kuza nescreen sawo, esenziwe yiphaneli ye-OLED ene-A + isatifikethi esivela kwi-DisplayMate esibonisa umgangatho wepaneli yesi sixhobo esiya kuba malunga nee-intshi ezi-6. Ngoku, kufuneka silinde iintsuku ezili-15 kuba i-OnePlus isilungiselele yona OnePlus 7 Pro ibonakala intle ngokwenene. Njengamaxesha onke, siza kugubungela umboniso ukuze sikubonise zonke iinkcukacha zesiphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Lo mfanekiso wentengiso uqinisekisa uyilo lwe-OnePlus 7 Pro